ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်သည် ကန်နိုင်ငံခြားရေးဝါဒ၏ သော့ချက်တရပ် ဖြစ်သည်
U.S. Ambassador to the U.N. Samantha Power addresses the media followingaSecurity Council vote aimed at ensuring that U.N. officials could monitor evacuations from the Syrian city of Aleppo, Dec. 19, 2016.
ကမ္ဘာတဝန်း ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ အပြန်အလှန်နားလည်မှုကို လေးစားလိုက်နာကြရေး၊ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အားပေးဖို့အတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက သံဓိဌာန်ချမှတ်ထားပါတယ်။ ဒါဟာ အမေရိကန်တွေရဲ့ ခံယူချက်ကို ထင်ဟပ်ရုံတင်မကအမေရိကန်ပြည်တောင်စုရဲ့ မဟာဗျူဟာမြောက် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနဲ့ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒရဲ့ အခရာကျတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ USAID - အမေရိကန်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှုအေဂျင်စီ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Samantha Power က အခုလိုပြောပါတယ်။
“ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအားပေးပြီး၊ လူနည်းစုဘာသာရေးကို အကာအကွယ်ပေးတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ဒီမိုကရေစီက ပိုပြီးတည်ငြိမ်ပါတယ်။ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွေကြားမှာ တန်းတူညီမျှမှုနဲ့ သာယာဝပြောရေး ပိုပြီးဖွံ့ဖြိုးနိုင်ခြေများပါတယ်၊ အမျိုးသမီးနဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို ပိုပြီး အကာအကွယ်ပေးနိုင်ကြပါတယ်။ အားလုံးခြုံကြည့်ရင် လူနေမှုဘဝ တိုးတက်နေတာတွေ့ရမှာပါ လို့ပြောသွားတာပါ။”
ဘာသာရေးကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့ ရန်လိုမှုမရှိ နိုင်ငံတွေရဲ့ GDP ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုဟာ၊ ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုများတဲ့နိုင်ငံတွေထက်၊ နှစ်ဆတိုးတက်မှုရှိတယ်လို့ သုတေသနမှတ်တမ်းက ဆိုပါတယ်။ လူနည်းစုဘာသာဝင်တွေကို ဖိနှိပ်တာ၊ ခွဲခြားဆက်ဆံတာ၊ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခွင့်ကို ကန့်သတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ မတည်ငြိမ်မှုနဲ့ ပဋိပက္ခတွေကိုဖြစ်ပွားစေတယ်လို့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးSamantha Power ကပြောပါတယ်။
“ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် ငြင်းပယ်ခံရတာဟာ လူမှုပဋိပက္ခနဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ပိုဖြစ်ပွားစေတာနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဘာသာရေးကန့်သတ်ချက်လုံးဝမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေထက် အစိုးရက ဘာသာရေးကန့်သတ်ချုပ်ချယ်တာတွေ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာ လူမှုအကြပ်အတည်းတွေ နှစ်ဆပိုတွေ့ရဖို့များတယ်လို့ ပြောသွားတာပါ။.”
ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ယုံကြည်ရာ ဘာသာအသီးသီးကို လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်နိုင်ပြီး၊ ဘာသာအားလုံးရဲ့ ဘုရားကျောင်းတွေ၊ ဝတ်ပြုဆုတောင်းတဲ့နေရာတွေကို အတားအဆီးမရှိ မသွားရောက်နိုင်သေးသ၍ ရေရှည်တည်တံ့မယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးမရရှိနိုင်ဘူးဆို ပိုပြီးရှင်းလာတယ်လို့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးSamantha Power ကထောက်ပြပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒင်န်က အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒမှာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဟာ ကာကွယ်ရေးနဲ့ သံတမန်ရေးလိုဘဲ အရေးကြီးတယ်လို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းအတွက် ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကို အကာအကွယ်ပေးဖို့၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ ရက်စက်စွာနှိပ်ကွပ်မှုတွေမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ကြဖို့အပါအဝင်၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုတွေကို တုံပြန်ကြဖို့အတွက် USAID ရဲ့ Faith Based and Neighborhood Partnerships ဘာသာရေးဆိုင်ရာ မိတ်ဖက် ကူညီရေးအဖွဲ့ရုံးက ကျွမ်းကျင်သူတွေကို လေ့ကျင့် ပျိုးထောင်ပေးနေပါတယ်လို့ အခုလိုပြောပါတယ်။
“နိုင်ငံတကာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် တိုးတက်မှုရှိအောင် ချဉ်းကပ်တဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တူညီတဲ့ ဘုံအခြေခံသဘောကတော့ ကမ္ဘာကြီးတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဟာ ထူးခြားတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အသိအမှတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားတာပါ။”
ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ ကောင်းချီးတွေကတဆင့်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်း လွတ်မြောက်မှုကို ပိုက်ထွေးနိုင်ကြပြီး၊ ကမ္ဘာတဝန်းက ပြည်သူတွေ သိက္ခာရှိစွာ လွတ်မြောက်မှုအတွက် စိတ်ချရအောင်၊ ထောက်ခံအားပေးနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ရှိတာနဲ့အမျှ ကမ္ဘာတဝန်းဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဆက်လက်ရပ်တည်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ USAID အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Samantha Power ကပြောဆိုလိုက်ကြောင်းပါခင်ဗျား။
ကမ်ဘာတဝနျး ဘာသာရေးလှတျလပျခှငျ့နဲ့ အပွနျအလှနျနားလညျမှုကို လေးစားလိုကျနာကွရေး၊ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ အားပေးဖို့အတှကျ အမရေိကနျပွညျထောငျစုက သံဓိဌာနျခမြှတျထားပါတယျ။ ဒါဟာ အမရေိကနျတှရေဲ့ ခံယူခကျြကို ထငျဟပျရုံတငျမကအမရေိကနျပွညျတောငျစုရဲ့ မဟာဗြူဟာမွောကျ အမြိုးသားအကြိုးစီးပှားနဲ့ နိုငျငံခွားရေးမူဝါဒရဲ့ အခရာကတြဲ့ ရညျရှယျခကျြလညျးဖွဈပါတယျလို့ USAID - အမရေိကနျနိုငျငံတကာဖှံ့ဖွိုးမှုအဂေငျြစီ အုပျခြုပျရေးမှူး Samantha Power က အခုလိုပွောပါတယျ။
“ဘာသာရေးလှတျလပျခှငျ့ကိုအားပေးပွီး၊ လူနညျးစုဘာသာရေးကို အကာအကှယျပေးတဲ့ နိုငျငံတှမှော ဒီမိုကရစေီက ပိုပွီးတညျငွိမျပါတယျ။ လူမှုအသိုငျးအဝိုငျးတှကွေားမှာ တနျးတူညီမြှမှုနဲ့ သာယာဝပွောရေး ပိုပွီးဖှံ့ဖွိုးနိုငျခွမြေားပါတယျ၊ အမြိုးသမီးနဲ့ မိနျးကလေးတှရေဲ့ အခှငျ့အရေးကို ပိုပွီး အကာအကှယျပေးနိုငျကွပါတယျ။ အားလုံးခွုံကွညျ့ရငျ လူနမှေုဘဝ တိုးတကျနတောတှရေ့မှာပါ လို့ပွောသှားတာပါ။”
ဘာသာရေးကနျ့သတျခြုပျခယျြမှုတှနေဲ့ ရနျလိုမှုမရှိ နိုငျငံတှရေဲ့ GDP ပွညျတှငျးအသားတငျထုတျလုပျမှုဟာ၊ ကနျ့သတျခြုပျခယျြမှုမြားတဲ့နိုငျငံတှထေကျ၊ နှဈဆတိုးတကျမှုရှိတယျလို့ သုတသေနမှတျတမျးက ဆိုပါတယျ။ လူနညျးစုဘာသာဝငျတှကေို ဖိနှိပျတာ၊ ခှဲခွားဆကျဆံတာ၊ လှတျလပျစှာကိုးကှယျဝတျပွုခှငျ့ကို ကနျ့သတျတာတှလေုပျနတေဲ့ နိုငျငံတှမှော မတညျငွိမျမှုနဲ့ ပဋိပက်ခတှကေိုဖွဈပှားစတေယျလို့ အုပျခြုပျရေးမှူးSamantha Power ကပွောပါတယျ။
“ဘာသာရေးလှတျလပျခှငျ့ ငွငျးပယျခံရတာဟာ လူမှုပဋိပက်ခနဲ့ အကွမျးဖကျတိုကျခိုကျမှုတှေ ပိုဖွဈပှားစတောနဲ့ ဆကျစပျနပေါတယျ။ ဘာသာရေးကနျ့သတျခကျြလုံးဝမရှိတဲ့နိုငျငံတှထေကျ အစိုးရက ဘာသာရေးကနျ့သတျခြုပျခယျြတာတှေ တငျးတငျးကပျြကပျြလုပျတဲ့နိုငျငံတှမှော လူမှုအကွပျအတညျးတှေ နှဈဆပိုတှရေ့ဖို့မြားတယျလို့ ပွောသှားတာပါ။.”
ပွညျသူတှအေနနေဲ့ ယုံကွညျရာ ဘာသာအသီးသီးကို လှတျလပျစှာကိုးကှယျနိုငျပွီး၊ ဘာသာအားလုံးရဲ့ ဘုရားကြောငျးတှေ၊ ဝတျပွုဆုတောငျးတဲ့နရောတှကေို အတားအဆီးမရှိ မသှားရောကျနိုငျသေးသ၍ ရရှေညျတညျတံ့မယျ့ ငွိမျးခမျြးရေးမရရှိနိုငျဘူးဆို ပိုပွီးရှငျးလာတယျလို့ အုပျခြုပျရေးမှူးSamantha Power ကထောကျပွပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ သမ်မတဂြိုးဘိုငျဒငျနျက အမရေိကနျနိုငျငံခွားရေးမူဝါဒမှာ ဖှံ့ဖွိုးရေးဟာ ကာကှယျရေးနဲ့ သံတမနျရေးလိုဘဲ အရေးကွီးတယျလို့ ရှငျးရှငျးလငျးလငျး သတျမှတျထားတာဖွဈပါတယျ။ လူတိုငျးအတှကျ ဘာသာရေးလှတျလပျခှငျ့ကို အကာအကှယျပေးဖို့၊ ရိုးရာယဉျကြေးမှုတှကေို ထိနျးသိမျးဖို့နဲ့ ရကျစကျစှာနှိပျကှပျမှုတှမေဖွဈအောငျ ကာကှယျကွဖို့အပါအဝငျ၊ လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖေါကျမှုတှကေို တုံပွနျကွဖို့အတှကျ USAID ရဲ့ Faith Based and Neighborhood Partnerships ဘာသာရေးဆိုငျရာ မိတျဖကျ ကူညီရေးအဖှဲ့ရုံးက ကြှမျးကငျြသူတှကေို လကေ့ငျြ့ ပြိုးထောငျပေးနပေါတယျလို့ အခုလိုပွောပါတယျ။
“နိုငျငံတကာဘာသာရေးလှတျလပျခှငျ့ တိုးတကျမှုရှိအောငျ ခဉျြးကပျတဲ့ ပုံစံအမြိုးမြိုးရှိကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တူညီတဲ့ ဘုံအခွခေံသဘောကတော့ ကမ်ဘာကွီးတညျငွိမျရေးနဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ ဘာသာရေးလှတျလပျခှငျ့ဟာ ထူးခွားတဲ့ လူ့အခှငျ့အရေးဖွဈတယျဆိုတာကို အသိအမှတျပွုရမှာဖွဈတယျလို့ပွောသှားတာပါ။”
ဘုရားသခငျရဲ့ ကြေးဇူးနဲ့ ကောငျးခြီးတှကေတဆငျ့၊ အမရေိကနျပွညျထောငျစုအတှငျး လှတျမွောကျမှုကို ပိုကျထှေးနိုငျကွပွီး၊ ကမ်ဘာတဝနျးက ပွညျသူတှေ သိက်ခာရှိစှာ လှတျမွောကျမှုအတှကျ စိတျခရြအောငျ၊ ထောကျခံအားပေးနိုငျတဲ့ စှမျးရညျရှိတာနဲ့အမြှ ကမ်ဘာတဝနျးဘာသာရေးလှတျလပျခှငျ့အတှကျ အမရေိကနျပွညျထောငျစုက ဆကျလကျရပျတညျသှားမှာဖွဈတယျလို့ USAID အုပျခြုပျရေးမှူး Samantha Power ကပွောဆိုလိုကျကွောငျးပါခငျဗြား။